Khabiirka Cimilada ah wuxuu bixiyaa Tababarida Raadinta ee On-site
Milkiilayaasha ganacsigu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in ay ku habboontahay boggooda mashiinnada raadinta xisaabiyay 25% dhammaan qodobada saadka SEO. Maqaalka soo socda ayaa sidaas ah fududeeyey, iyo dhamaystirka casharka udiyaar-gareynta goobta. Waxay u adeegsan doontaa qof kasta oo ku cusub SEO, ama qof kasta oo jecel inuu ka dhigo midka ugu fiican ee ka soo baxa goobta.
Tilmaan-bixiyahan, oo ay bixiso Michael Brown, Maareeyaha Guusha Macaamiilka Semef , wuxuu ka kooban yahay arrimaha soo socda:
Mid ka mid ah sifooyinka ugu da 'weyn ee websiteka waa astaanta cinwaanka. Waxay ka caawisaa fududaynta qaabeynta bogga - skate logos maker fonts. Tan iyo markii dadku abuuray goobo, tagska cinwaanka ayaa cadeeyay in ay faa'iido u leedahay. Tani waxay u adeegtaa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan marka ay timaaddo wax-qabadka
Wixii SEO ah oo idil, waa inay jiraan caddaynta adeegsiga ereyga muhiimka ah. Ereyada waa kuwa ugu muhiimsan ee dhan Ololaha SEO . Wax kasta oo SEO ah oo aan ku jirin erayada muhiimka ah ee qaab-dhismeedkiisa ma laha aasaas adag oo aan hagaajin doonin xaaladda ganacsiga internetka. Mid ka mid ah siyaabaha ay dadku u baran karaan sida loola macaamilayo boggaga internetka ee ku-meel-gaadhka ah waa in la fahmo waxa cufnaanta muhiimka ah tahay, iyo waxa ay tahay wax walba.
Ballanqaadka Ereyada, Baaxadda, Xidhiidhka
Erayada waxaa ka mid ah xeelado fara badan marka ay timaaddo wax-qabadka. Waxaa jira qodobo kale oo muhiim ah oo saameyn ku yeesha inta lagu jiro dayactirka goobta..Mid waa inuu fahamaa balaarinta, soo noq-noqosho, iyo meel u dhow. Iyada oo dhammaan fikradahaas muuqaal ahaan, milkiilaha bogagga wuxuu awood u yeelan karaa awoodda iyo dejinta ereyada muhiimka ah ee ku jira mawduuca ay dirayaan.
Mid ka mid ah siyaabaha ka soo jeeda bogga ayaa heli kara gaadiidka badan waa in ay leeyihiin ilo dibadda ah oo isku xira bogga. Kuwaas waxaa loogu yeeraa xidhiidhada la soo gudbiyey. Milkiilaha bogagga waxaa laga yaabaa inuu helo xiriirro laga helo ilo caan ah oo aan la aqoon. Internetku wuxuu ka kooban yahay xiriiro mar kasta oo uu isku xiro xiriiriye, waxaa jira udhac u sareeya in uu u wareejiyo bog kale. In SEO, hal jid si aad u fahamto sida loo sameeyo tallaabo horay u ah in SEO optimization waa in la ogaado sida loo helo iyo maareeyaan xiriirada ka baxsan. Qodob kale oo muhiim ah oo la xusuusto waa isticmaalka ereyada qarsoon ee qarsoodiga ah ee ku xiran xiriirada.
Iyada oo aqoonta xiriirka ka baxsan, wax kale oo laga barto waa isticmaalka image SEO. Waxay ka caawin kartaa milkiilaha badanaa tan iyo sawirrada ay u gudbinayaan macluumaad badan oo adag oo haboon in qof cusub oo SEO ah uu fahmi karo. Tababarka waxaa ka mid ah tilmaame sida ku saabsan sida milkiilayaasha bogagga ay ufilan karaan goobtooda sawiradooda. Sawirada caawimaadda SEO marka ay qabaan Sub Text oo ku jira sharaxaadooda. Sidoo kale, mid ka mid ah waxtarrada ugu fiican ayaa ku habboon in ay ku daraan ereyada muhiimka ah. Tababarka wuxuu sharaxayaa haddii beddelaad iyo in kale aan la beddelin feylku wuxuu saameeyaa SEO.
Caawinta bogsashadu waxay ku caawineysaa taranka qaab-dhismeedka bogga. Sidan oo kale, makiinadaha searchers iyo macaamiisha waxay u arkaan in ay fududahay si ay u socdaan website-ka. Meelaha laga helo bogga waa hal hab oo lagu hagaajin karo dhismaha SEO si kor loogu qaado waaya-aragnimada macmiilaha iyo sidoo kale algorithms search engine.
Cinwaanada URL waxay tixraacayaan cinwaanka saxda ah ee website-ka hadda midka hada socda. Waxay u taagan yihiin meesha ay ku yaalaan bogagga shabakadda. Marka hal nooc oo ah URL ee cinwaanka cinwaanka cinwaanka cinwaanka, slugs URL ayaa go'aamiya sida user uu u galo bogga internetka. Waa mid ka mid ah waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee lagu sameeyn lahaa goob-raadinta goobta
Isku xirnaanta gudaha ayaa dhan oo ku saabsan hubinta in dhammaan bogagga ku yaal goobta ay isku xiran yihiin. Waa wax ka badan oo kaliya nashqadeeyn iyo talo bixin.